I-Cement Grinding Aid, i-Concrete Accelerator, i-Mortar Additive-Fluffier
Ulwandiso lwekhonkrithi, i-factory ngqo sup...
Fine Factory ixabiso lokugaya isamente uncedo lokugaya Cement A...
Konke Okulungileyo Ukucoceka okumanzi Ukuxuba Izifakelo zodaka Fo...
Shijiazhuang Fluffier International Trading Co., Ltd.(Hebei Huahai Admixture Co., Ltd.) inkampani yezixhobo zemichiza yokwakha yobugcisa obuphezulu kwaye ikakhulu ibonelele: uncedo lokusila isamente, imathiriyeli ekrwada yesamente, isongezo sodaka olomileyo oluluthuli, isidibanisi sodaka oluxutyiweyo olumanzi, i-concrete admixtures HPMC (i-hydroxypropyl methyl cellulose), i-RDP (i-emulsion e-redispersible powder), i-HPS (i-hydroxypropyl starch ether) kunye ne-PVA (i-Polyvinyl alcohol powder) kunye ne-HPEG.
Ukuza kuthi ga ngoku, kunye neendawo ezipheleleyo zokubeka iliso ezisemgangathweni, zineenjineli ezili-17 kunye nabacebisi bobugcisa abangama-30.
Inkampani yethu ingumnikezeli othembekileyo weekhemikhali ezibalula ezineemveliso ezisemgangathweni ezinikezelwa kubavelisi abakhulu besamente eTshayina kangangexesha elide.
Siye saqinisekiswa yi-ISO9001: inkqubo yolawulo lomgangatho we-2015.
ukuba 17 iinjineli kunye 30 abacebisi zobugcisa.
I-Italiya: Ngexesha leenyanga ezilithoba zokuqala ze-2021, i-Cementir Holding irekhode intengiso edibeneyo ye-Euro1.01bn, inyuke nge-12% unyaka nonyaka ukusuka kwi-Euro897m kwixesha elihambelanayo lika-2020. Ingeniso yayo ngaphambi...
I-Indiya: I-Ambuja Cement ifumene ukuqinisekiswa kwi-Science-Based Targets Initiative (SBTi) ukuba iithagethi zayo zokunciphisa i-CO2 zihambelana nemeko engaphantsi kwe-zero yokufudumala kwehlabathi. I-Infoline yaseIndiya Entsha...